Hlaziya i-Samsung Galaxy S yakho kwi-Ice Cream Sandwich | I-Androidsis
Phucula iGalaxy S yakho kwi-Ice Cream Sandwich
I-ROM IPHELEKILEYO, BONA IVESI ENTSHA APHA
NGOKU KUFUMANEKA IBHAYIBHILE YOKUGQIBELA YOKUSEBENZISA I-VERSION 4.1.1
Kuyaziwa kuyo yonke loo nto Samsung ayizukuxhasa Android 4.0 komnye wakhe smartphones Iimpawu kunye nabathengisi abathengisayo, Samsung Galaxy S.
Yiyo loo nto, esona sizathu siphambili sale tutorial, silandela amanyathelo endiwachaza ngokweenkcukacha apha ngezantsi, siya kuba nakho ukuhlaziya i-Samsung Galaxy S yethu ngokungekho mthethweni kuhlobo lwamva nje lwe-Android, ngenxa yoku ndiza kuchaza inkqubo yokufaka i I-Rom Samsung Galaxy S Android 4.0.3 Elite 9.1 (ICS).
1 Ukulungiselela i-Galaxy S yethu
2 Indlela yokufaka i-Rom Elite 9.1
Ukulungiselela i-Galaxy S yethu
Nika amandla ukulungiswa kwe-USB
Into yokuqala ekufuneka sinayo yi Samsung Galaxy S, okanye ikwaziwa njenge GT-I9000. Ibhetri yakho kufuneka ihlawulwe 100 amaxesha 100 Ukuthintela iingxaki ezingeyomfuneko kunye nezoyikiso ezahlukeneyo, kufuneka kunjalo Ingcambu kunye naye Ukubuyiselwa kweClockWorkmod ifakwe ngokufanelekileyo ukuze ikwazi ukuKhanyisa iRom kule ndawo ichazwe ngasentla,
Ukuba i-Galaxy yakho ayimiliswanga kwaye awunayo i-Recovery eguqulweyo efakiweyo, ungakhathazeki, Yiza ngapha kwesi sifundo silandelayo, landela amanyathelo abhalwe leta, kwaye uya kuyifumana kwisithuba esingaphantsi kwemizuzu elishumi elinesihlanu Ingcambu kunye naye Ukubuyiselwa kweClockWorkmod isebenza ngokupheleleyo.
Kuyacetyiswa yenza ukhuphelo lwencwadi eneenkcukacha lwe-EFS, kunye nayo yonke idatha esifuna ukuyigcina kunye nekopi yazo zonke izicelo zethu, kuba kwinkqubo yofakelo siza kufomata yonke i-terminal.
Indlela yokufaka i-Rom Elite 9.1
Ndikhethe i-Rom 9.1, nangona kukho uguqulelo lwe-10, ukusukela kumava obuqu kunye nendlela esebenza ngayo, le indinike iziphumo ezingcono kunenguqulo yokugqibela epapashwe ngumbhali.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile Khuphela uguqulelo lwe-Elite Rom 9.1Nje ukuba ifayile icinezelweyo ikhutshelwe, Siza kuyikopa njengengcambu yememori yangaphakathi yeGPS S.
Emva koko siya kuhamba kwifowuni siye kwindlela imenyu / useto / usetyenziso / uphuhliso kwaye siza kwenza ukhetho ukususa iibhagi kwi-USB, uyenzile le nto singayicima eyethu Galaxy S kwaye uyivule ngendlela ukuchacha usebenzisa combo yamaqhosha amathathu, (Vol up + Ikhaya + laMandla).
Nje ukuba sikwisikrini sokuBuyisa kwakhona, siya kuhla siye kukhetho Ukunyuka kunye nokuGcina kwaye siya kukhetha ifomathi Inkqubo, ifomathi efihlakeleyo, ifomathi yedatha kunye nedatha yefomathi, xa sele sigqibile siza kuhla siye kukhetho Buya umva ukubuyela kwiscreen sokuBuyisa kwakhona kwaye ukhethe ukhetho Sila idatha / uphinde uqalele okweshishini, emva koko siza kuhla siye kukhetho Susa indawana ebambekayo kwaye ekugqibeleni siya kuhla siye kukhetho phambili kwaye ngaphakathi siza kukhetha ukhetho Sula i-cache ye-Dalvik.
Indlela yokubuyisela kwimeko yesiqhelo
Siza kubuyela kwiscreen sokuBuyisa kwakhona usebenzisa ukhetho Buya umva kwaye siya kufaka i-Elite Rom, ngenxa yoku siya kukhetha ukhetho Faka i-zip kwi-sdcard, emva koko siya kukhetha Khetha i-zip kwi-sdcard yangaphakathi kwaye ekugqibeleni siya kuhamba kwisikhombisi seefayile de sifumane ifayile ecinezelweyo ebesikhuphele ngaphambili kwaye siyikope kwingcambu yememori yangaphakathi yeGalaxy, siya kuqinisekisa kwaye silinde ukufakela ukugqiba kunye Samsung Galaxy S.
Ukuba i-terminal ayizukuqala ngokutsha ngokuzenzekelayo kwaye ihlale kwiscreen sokuBuyisa kwakhona, siya kubuyela kwiscreen esikhulu usebenzisa ukhetho Buya umva kwaye ukusuka apho sinokukhetha ukhetho Inkqubo yokuphinde ubhuthe ngoku.
Kungenzeka ukuba xa uqala kwakhona, iGalaxy ikhona iya kuhlala iluphu engapheliyo kwisikrini se ukuqalelisa, Oku kungenxa yokuba ekuqaleni besifakele ifayile ye Intsimbi entshaUkuyisombulula, kuya kufuneka ufake kwakhona ukubuyisela kwakhona, khumbula ngokudibanisa kwamaqhosha amathathu, kwaye wenze kwakhona inyathelo lokugqibela leFlashing, ngakumbi ukhetho Faka i-zip kwi-sdcard / Khetha i-zip kwi-sdcard yangaphakathi.
Ngale nto uya kuyifaka ngokuchanekileyo ifayile ye- I-Rom Samsung Galaxy S Android 4.0.3 Elite 9.1 (ICS)Ngoku ndingakucela nje ukuba uyonwabele.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo
Khuphela - I-Rom Elite 9.1
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Rom Samsung Galaxy S Android 4.0.3 Elite 9.1 (ICS)
Izimvo ezi-119, shiya ezakho
Ngaba olu hlaziyo lusebenzela iGlass S scl?… Kwaye ukuba ayisebenzi, ngaba kuya kubakho uhlaziyo lwalesi sixhobo?
hayi, kuphela i-9000
I-SCL ayilindelanga nantoni na engaphaya koko sele ikho ... uhlaziyo olusemthethweni olungenakubonwa, kwaye ukubona ukuba kuncinci kangakanani isonka sejinja ... ummangaliso wokuba umntu apheke i-ICS ye-SCL ...
Iposti yoqobo ikwi http://www.htcmania.com/showthread.php?t=358532
Yitsho ukuba ayisiyi-4.0.3 kodwa ngu-4.0.4 kwaye sele iyi-rom 10.1
Okokuqala, ngu-4.04, hayi u-4.03
Okwesibini, umsonto wokuqala apho i-rom yapapashwa khona yi-htcmania: http://www.htcmania.com/showthread.php?t=358532
Okwesithathu, umbhali we-Elitemovil rom sele ekwinguqulelo 10.1
Ewe, njengoko besitsho, kwi htcmania.com leyo ngumsonto osemthethweni, nangona ungumthombo okhankanya i-xda, kwaye njengoko abanye besitsho, iya kuguqulelo lwe-10.1 kwaye akukho sizathu sokuba nomona yile ikhutshwe yi-Samsung ukuba Ityunjelwe ukwenza i-ICS ye-SGS, nangona ndingathandabuzi ukuba ibhetele kune-elite ...
Olu khonkco lwantlandlolo apho i-Elite rom yafakwa kuhlobo lwayo lwamva nje, ngendlela isiqwenga sothando esiphucula isitokhwe se-2.3 samsung
Ungayifaka irediyo ye-fm?
Ndinemibuzo emibini, awunayo irediyo ye-FM kwaye i-WIFI ayindikhonzi, ndingazilungisa njani zombini ezi mpazamo
Winder Sosa sitsho
Ndinombuzo ngaba isixhobo siphulukana nonxibelelwano kwi-3g?
Phendula kwi-Winder Sosa
Ngaba umntu angatsho ukuba unomathotholo ??, okanye ukuba unokufakwa? Ndiyabulela kwangoko
Hlaziya kuhlobo lwamva nje kwaye andinayo ipakethe yedatha, ndivela e-Ecuador, nayiphi na imodem oyicebisayo? Enkosi kakhulu kwangaphambili 🙂
Kuya kufuneka ukuba uqwalasele ii-APN kunye nedatha yomqhubi wakho
Ndinayo i-samsung galaxy s i9000 kwaye yayihlala ixhonyiwe xa ndingayilindelanga, ngakumbi ngabaqhubi be-gps, kwaye ngamanye amaxesha yayihamba kancinci. Ndihlaziye inkqubo yokusebenza amatyeli aliqela kwaye ingxaki ayilungisekanga.
Ndifakele igumbi le-Android 4.0.3 Elite 9.1, kwaye ndonwabile kakhulu. Malunga neeveki ezimbini ndibekile, khange iphazanyiswe nokuba kukanye kwaye yonke into ihamba ngokukhawuleza kunangaphambili.
Enye inkqubo engekhoyo, njengonomathotholo, uyikhuphele kurhwebo ngaphandle kweengxaki. Ndizikhuphele iiradiyo ezisuka eSpain kwaye isebenza nangaphandle kokuqhagamshela ii-headphone.
Kukho indibaniselwano enokuthi ilahlekise ekuqaleni, njengokufumana umkhombandlela apho ikhoyo i-SD yangaphandle, kodwa uyayilungisa kancinci kancinci.
Emva kokukhuphela iiRadiyo de España ndiye ndaqonda ukuba yenye yezo zisebenza kwi-Intanethi, kodwa ke ndazama i-Spirit fm application evulekileyo, eyi-fm yokwenyani, kwaye isebenze kakuhle kum kwi-Samsung Galaxy S GT-i9000. Ndicinga ukuba lolona khetho kuphela ngalo mzuzu wengxaki ye-fm.
Ndiyikhuphele kwi http://rapidlibrary.com/files/spirit-fm-unlocked-spirit-fm-radio-rar_ulc9ezzqtxi8xon.html.
Yifayile ecinezelweyo eneenguqulelo ezininzi zesicelo. Ndiyivulile nge-winar ndaza ndabeka u "Spirit FM Unlocked vApr7.apk" version, ejongeka ngathi yeyokugqibela, kwifolda ekwikhadi le-sd, njengokukhutshelwa. Nawuphi na umbonisi wefayile uya apho isicelo sikhona kwaye uxelele ukuba sifake.
Ndibeke ezi ndlela zilandelayo: Ibhendi yommandla: ISpain, iAudio / indlela: IGPSS alsa / INGOZI. Iyakulumkisa ukuba olu khetho lusonakalisile isithethi kwezinye iifowuni kodwa akunakulindeleka kwaye sele lulungisiwe kwiinguqulelo zamva nje, ndiye ndabeka umngcipheko kwaye yandisebenzela.
Ingcebiso: Kulabo bafuna ukumamela unomathotholo we-fm kwisandisi-lizwi ngaphandle kokurhuqa ii-headphone phezu kwetafile:
Khangela ii-headphone ezindala ezingasebenziyo nokuba azifani. Sika iintambo ukuya kwi-3-4 cm kwaye ushiyeke kuphela iplagi kunye neemilimitha ezimbalwa zekhebula. Ngale nto, ifowuni icinga ukuba unazo ii-headphone ezidityanisiweyo, kwaye ke ine-eriyali, kwaye isithethi sele sisebenza. Ulwamkelo lubi kakhulu kuba i-eriyali imbi kakhulu, kodwa ukuba umqondiso osuka kwisikhululo womelele uhlala uthathwa kakuhle. Inye kuphela i-eriyali encinci eseleyo. Ukuba awunasiginali, sika intambo ixesha elide.
Ngaba ingafundiswa le Samsung Galaxy S + (GT-i9001)?
Akukho mhlobo, isiphelo ngasinye sinezakhiwo ezahlukeneyo kwaye ke ziiRom ezahlukeneyo.
Ndinamathandabuzo malunga nendlela yokukopa ifayile ecinezelweyo kwingcambu yememori yangaphakathi yefowuni, umntu angandixelela ukuba ndenze njani, imibuliso kunye nombulelo kwangaphambili.
Xhuma ifowuni nge-USB kwikhompyutha, xa ufumana ifolda kwimemori yeGalaxy kwaye uyivule, eya kuba yingcambu.
Oku kuthetha ukuba awuyikopi nakweyiphi na incwadi eneenkcukacha, ukuba awutsali ngqo kwi-zip kwi-rom.
UJose Arroyo sitsho
I-Wi-Fi ayisebenzi kum, ndingenza ntoni? Ngaphandle kwale nto yonke into ihamba kakuhle kakhulu
Phendula kuJosé Arroyo
Khanyisa iRom kwakhona, ulandela imiyalelo kwileta.
Enkosi kakhulu mhlobo wam, isebenze kakuhle kakhulu kum
Ndiyabulela kakhulu ! Yonke into ihambe kakuhle, yonke into ihambe kakuhle kakhulu. Ukubulisa
Phendula ku Carlos3_ac89
Hee mfondini, ungayisebenzisa i-wifi?
Andazi ukuba izakwenzeka komnye umntu, kubonakala ngathi i-accelerometer ayisebenzi, kuba nokuba ndisebenzisa ukhetho lokujikeleza kwesikrini, alwenzi njalo.
Ndifumana umyalezo «Inkqubo ye-android.process.media iyekile», ndayisombulula njani?
INgcwele uJoseph sitsho
Ijongeka intle. Kodwa andazi ukuba iyandisebenzela. Ndine-Samsung Galaxy S wifi 3.6. Yiza, akanayo ifowuni, ungumdlali we-mp3. Ngaba le rom ingandinceda?
Yiya kukhetho lokumisela kwaye undixelele ukuba yeyiphi imodeli oyisebenzisayo.
UBryan brennan sitsho
Imibuliso evela ePanama
Phendula uBryan Brennan
Ndinomnyele we-S I9000 onefirmware 2.3.6 XXJW4, ingaba le rom iyandisebenzela? okanye kufuneka ndifakele i-JVU version kuqala, okanye iyafana?
Umbuzo omnye ... le femu isekelwe ??? ... .. ukuba akunjalo, inokwenziwa ngokulula ???….
Omnye umbuzo ... inkqubo yokuhlaziya ithatha ixesha elingakanani ???? Imayini ithatha malunga nemizuzu emi-5 kwaye ndiyabona ukuba ilogo yegalakisi S iyaphuma kwaye oonobumba badlula ngesantya esiphezulu… .. Andazi nokuba lo loop ungapheliyo wenzekile okanye uyathatha kancinci… ..
ufakelo lulahliwe !!! Iidayos ndilandele onke amanyathelo ... ayiqali 🙁
Ndifumana impazamo ngalo lonke ixesha kwinkqubo ye-android.process.media iyekile !!!!!! kwaye ayizukundivumela ndingene kwimarike okanye nantoni na! Ngaphandle koko ndenza kakuhle ... https://www.androidsis.com/samsung-galaxy-s-como-instalar-una-rom-de-una-manera-limpia/ kwaye ulandele amanyathelo oku ... Izisombululo ngoku nceda !!
Enkosi kakhulu kwisifundo, esifakwe ngokugqibeleleyo, sihamba kakuhle kakhulu
Ndiyabulela kakhulu ngezimvo zakho.
Umbuzo ndenza njani ukuba unomathotholo we-Samsung Galaxy uve? Sele enazo ii-headphone kodwa akayiva lento ndiyenzayo?
Ngokubanzi ndinethamsanqa elibi, kwaye ngeli xesha ibingazukuncipha, xa ndifikile kwinyathelo lokufaka i-zip kwi-sdcard, i-zip endikhuphele kwingcambu, ndothuka! bekungekho kwaye ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi i-mvl icinyiwe. Wow, ndiphelelwe yi-mvl emva kokulayisha inkqubo, akukho ndlela yokufaka i-sdcard ngoku ...
E: ivolumu engaziwayo yendlela [/ sdcard]
E: Ayikwazi ukukhwela i-sdcard
Nasiphi na isisombululo?
Le rom isebenza nge-100% kwi-Samsung Captivate i897 ???
Ndilibele ukukhankanya ukuba ndinayo i-Gingerbread 2.3.4
Le rom yeye-i9000
nayiphi na irom elungileyo ye-i897 oyaziyo ??
Ndiza kujonga ezinye, kodwa kuvakala ngathi yinto evela ku-Master's Doc kum, kodwa ungandihoyi kakhulu.
Molo! Ndine-Samsung Galaxy S kodwa inguqulelo ene-Digital TV tuner. Ukufaka isicelo kule ROM ndiza kuhlala ndineTV? Ndiyabulela kakhulu!
Yintoni imodeli ethile, ngaba yi-GT-i9000?
Umzekelo nguGT-I9000B. EArgentina kukho iinguqulelo ezimbini, enye ine-tuner yedijithali eyakhelweyo (ikwabandakanya i-eriyali yokulahla yangaphandle) kunye nolunye uhlobo oluqhelekileyo ngaphandle kwetonela. Enkosi kakhulu ngokuzinikela kwakho kunye nomdla wokusiphendula sonke! 🙂
Leyo Rom yey-GT-i9000, ke ngenxa yesiphelo sakho ayisebenzi, into yedijithali yeTV ayilibale ukufumana ii-rom ics eziyiphetheyo.
Ndigqibile ukuyifaka kwithuba elidlulileyo kwaye ndinengxaki ne-wifi, i-icon iphawulwe, kodwa ayikhangeli kwaye ke, ayiqhagamsheli kuyo nayiphi na isignali engenazingcingo. Ndiwalandele onke amanyathelo ngamanye, kwaye ndaphinda inkqubo kwakhona ukuba bendiphosile, kodwa akukho ndlela. Naziphi na izimvo?
Faka le rom yeyona nto ilungileyo ngalo mzuzu:
URuben Gomez sitsho
Isandla ndenze uhlaziyo kwaye yonke into ilungile kodwa indinika umqondiso omncinci ngaphakathi kwendlu yam ukuba ngokungafaniyo nomfazi wam onesisele esinye kwaye le yoqobo inayo yonke imivalo kum ehlala enye kwaye ngamanye amaxesha iyahamba. nangona kunjalo inuka ngokugqibeleleyo. kodwa ingxaki yam imbi kakhulu ... ndizamile zonke iindlela ezikhoyo kwaye iseli yam ayifumani baqhubi ngokuchanekileyo. Unxantathu omthubi uyaphuma kwaye akaqhakamshelani noKies kwaphela ... izakuba yintoni ???
Phendula kuRuben Gomez
Guqula imodem ibe yeyilungele indawo ohlala kuyo.
Ngempazamo ndafaka i-zip kwi-sd yangaphandle kwaye ngoku andinakuphuma kwilog kuba ngoku andikwazi ukufikelela kuyo. Ndingenza ntoni?
Faka kwakhona kwakhona usebenzisa indibaniselwano yamaqhosha de isiphelo sicinywe kwaye siphinde sibuye, emva koko uye kwiiNtaba kunye nokugcina kwaye ubeke i-sdcard, uyixhume kwi-pc kwaye ukope i-rom kwingcambu ye-sdcard kwaye ubuye ubuye ubonakale.
Molo! Ndine-GT-i9000, ngokuqinisekileyo ukuba olu hlaziyo aluzukuvela kwiiKies? Ndiyoyika ukuqala ukwenza oku kwaye i-Smartphone yam ayiyi kuba nto. Ukuba ndenze into engalunganga okanye kukho into eyenzekileyo kwiselfowuni yam, ndingabuyela kuhlobo endinalo ngoku?
Molo mhlobo, ndivela ePanama kwaye ndihlaziye ii-ics kodwa ayisebenzi kum ukwenza umnxeba, ithi inethiwekhi ayifumaneki. Ndinike isandla, inombolo yam yeseli yi-66658029, uncokola nam ku-whats app, ndiyayixabisa.
Guqula i-rom kwaye ubeke i-remICS-UX kuyo, kwaye ukuba iyaqhubeka ikunika iingxaki zomqondiso, tshintsha imodem
UFranciscoRuizAntequera, enkosi kakhulu ngokundicebisa ukuba nditshintshe imodem, ngoku inkcukacha kukuba ndiyincutshe ye-Android kodwa andoyiki ukwenza amanyathelo njengoko ubacebisayo. Into endinqwenela ukuyazi yindlela endiyifumana ngayo imodem echanekileyo kwikhompyuter yam kwaye ukuba loo modem ndakuba ndiyifumene, yazi ukuba ndingayenza na loo modem kwirom endiyifakileyo rom 4.0.3 Elite 9.1 (ICS) ngaphakathi zip? ????? UKUKHUMBULA UKUBA NDIHLALA E-PANAMA Umsebenzi weselfowuni intambo kwaye awunazingcingo. Okokuqala, Enkosi
Banokufaka ifayile ye-rom 9.1 kwenye iseva, kuba letitbit.net ayizukundivumela ndiyikhuphele. Ndiyabulela kakhulu
Phendula u foranan
U-Efren Gregorio Pernia Duque sitsho
Imibuliso, fakela ingxelo entsha kwaye ihamba kakuhle kakhulu, kuphela ukuba andinakukwazi ukunxibelelana nemowudi ye-samsung kies kwi-pc, idibanisa kuphela kugcino oluninzi, ungandinceda koku? Enkosi
Phendula u-Efren Gregorio Pernia Duque
Andizisebenzisi ii-Kies kodwa ndiyaqikelela ukuba kuya kufuneka ukhuphe ukungasebenzi kwe-usb.
Kwenzeka into efanayo kum kwaye andinakho ukunxibelelana neKies, kubalulekile kum kuba ndiyangqamanisa imbonakalo ngeKies
Ngaphandle kwe-ICS rom okanye i-JELLY BEAN ungavumelanisa iiKies.
Nge-07/09/2012 ngo-18: 49, «Disqus» wabhala:
Molo, molweni emva kwemini, umbuzo endinawo umnyele we-samsung S Gt-I9000B, ingaba le rom iyakusebenzela, akunjalo? Ngaba unayo ukuvula kobuso?
I-rom eboniswe ngokuthe ngqo kwi-Nexus kwaye ilungiselelwe i-Galaxy S, kuba njengoko usazi ukuba akukho luhlaziyo lusemthethweni kwifowuni yethu.
Into yokuvula ebusweni ibonakala ngathi ibandakanyiwe, kodwa ukuba awukwazi ukuyikhuphela nge-OTA kwaye uyifake kwiNgxelo.
Molweni kulungile. I-ROM efanelekileyo. Ndineenyanga ezimbalwa kwaye ndicinga ukuba izakuhlala ithutyana. Umbuzo omnye: Ndingazi njani ukuba iROM isekwe kwi-AOSP okanye hayi? Ndingathanda ukuvavanya uGoogle ngoku ngokulandela la manyathelo
kodwa andazi ukuba ngale ROM izakusebenza.
Ndiyabulela kakhulu kwaye nomsebenzi omkhulu!
I-AOSP imele iProjekti yoMthombo ovulekileyo we-Android, kwaye ke ngenxa yoko i-Elite rom yi-AOSP kuba iboniswa ngokuthe ngqo kuhlobo lwangempela lwe-Samsung Galaxy Nexus.
Yizame kwaye usazise ukuba isebenza njani.
UChris Catalan sitsho
Molo NDIZENZILE ZONKE IINKQUBO NDAYE NDAQALA UKUQALA, KODWA IYAHLALA KWISIKRAYITHI APHO ITHI I-ANDROID KANYE ASISAYI KUNGENELA KWINKQUBO NANGONA NDIYICIMILE KWAKHONA, KUSENZEKA NJE NDINGENZA NTONI ??
Phendula uChris Catalán
Kwenzeka ngokufanayo !! Nditsho nokufaka iROM kwakhona (faka kwikhadi le-sd… njl.
Uncedo oluthile? : S
Ndingabuyela njani kwi-gingerbread?
Ukutshisa nge-odin okanye ukubeka nayiphi na i-Ginger rom kuyo
Chesco Fralmar sitsho
Molo, ndiyenzile yonke into ethi apha inyathelo ngenyathelo kodwa ndifumana lo myalezo ulandelayo: inkqubo ye-android.process.media ime kwaye ayindivumeli ukuba ndenze nantoni na. Unganceda undincede. Umbuliso
Phendula Chesco Fralmar
Umculo-womculo wehlabathi sitsho
Molo, ndinomthala i9000 okhutshiweyo ukuze usebenze ngetelcel chip, ukuba ifakiwe, le rom izakuqhubeka neetelcel chip yam ??????
HEYI !!! Molo, bendisebenzisa iROM ngaphezulu nje kwenyanga kwaye isebenza kakuhle kakhulu, ayiniki ngxaki. Ezinye zeengxaki kukuba ayiqali ukuvula ubuso, ithi "impazamo ukuqala ukuvula ubuso" nangona zombini iikhamera zam zisebenza kakuhle. Enye into kukuba sele behambe kabini ukuba andazi ukuba kwenzeka ntoni kwaye ngequbuliso iingoma, iifoto kunye nevidiyo zibhalwa kabini kwimemori yangaphandle, nangona zisebenza kuphela kwifayile enye. enye kukuba ngamanye amaxesha inethiwekhi yeselula kuthiwa ixhunyiwe kodwa ayithumeli okanye ifumane idatha. Andazi ukuba ezo zinto zinokulungiswa okanye iROM kwinguqulelo 10 ingcono.
Ukuba ungandinceda. Enkosi.
Molo olungileyo exo onke amanyathelo owathethileyo kwaye sele ndinayo inguqulelo yamva nje kodwa xa ndingena kwiselfowuni indibeka inkqubo ye-android.process.media ime. kwaye ayizukundivumela ndisebenzise igalari yezithombe okanye nantoni na, ndingayilungisa njani okanye ndenze ntoni?
Khangela iblogi yeerom ezintsha ngoku kunale.
URuben Daneris Quezada sitsho
Mholo. Umbuzo wesigidi seedola ngale nto ndingavula i-s9000 yam ngaxeshanye kwezinye iinkampani ????
Phendula kuRuben Daneris Quezada
Hayi, zizinto ezahlukeneyo.
Kwi-BLOG unesifundo sendlela yokuyikhulula simahla
Nge-09/08/2012 ngo-09: 53, «Disqus» wabhala:
Ndiyabulela nje ngendlela ecaciswe kakuhle ngayo, isebenze ngokugqibeleleyo kumthala wam S.
Umbuliso kunye nombulelo kwakhona
Nge-10/08/2012 ngo-20: 40, «Disqus» wabhala:
molo uncede pf. Ndizamile ukufaka njengoko isitsho ukuba ndifikile kwinqanaba lefomathi yedatha emva koko ndiyazi ukuba ndinempazamo exo kwaye yonke into isusiwe. ayindivumeli ukuba ndenze nantoni na okanye ndingene ekubuyiseleni. Ikhompyuter ayiyiqondi nokuba iyanceda pf
Hayi, ndineSamsung SGH-T959V ndingayisebenzisa le ROM ngaphandle kwengxaki.NCEDA NCEDA!
Le ROM yeyohlobo lwe-Samsung Galaxy S yeGT-I9000
Nge-14/08/2012 ngo-01: 16, «Disqus» wabhala:
awazi ukuba kukho nayiphi na iROM kule modeli ????? esk ndinayo kodwa ngesonka sejinja kwaye ndidikwe xD
Xa ndinexesha ndizokujonga
Nge-14/08/2012 ngo-01: 27, «Disqus» wabhala:
kulungile enkosi ndiyathemba kwaye ukuba kukho nayiphi na iROM entsha
Ingxaki yam kukuba iscreen asijikelezi xa ndijonga iifoto, ibikade izenza ngokuzenzekelayo, ndiye ndakhangela (ukuqiniseka) kwaye imiselwe ukuqhuba ngokuzenzekelayo, ungandinceda?
isebenza kwizixhobo ezivela eMexico (telcel) baseband version I9070UBKL3 kunye nenombolo yekhomp: GINGERBREAD.UBLD1
Phendula ku Deutsch_
Molo, ukuba ungayiphula neengcambu iseli yakho, ndinayo ngoku kwaye andifumani nto eMexico ??????
Izakusebenzela izixhobo ezivela eMexico (telcel) baseband version I9070UBKL3 kunye nenombolo yecomp: GINGERBREAD.UBLD1 ????????????????????????????? ??? ?????????????
mhlobo, ingaba inokusebenza kwisamsung galaxy player 5.0?!
Andizukuyivavanya, kuba ziitheminali ezahlukeneyo
Ndifumana impazamo "android.process.media" emva kokwenza onke amanyathelo kwaye ndaphinda ndaphindaphinda yonke into ukusuka kwifomathi kunye nokusula kunye nokufaka kwakhona i-rom kwaye, okwangoku, loo mpazamo ayiveli. Ndiyathemba ukuba iyaqhubeka kakuhle. Imibuliso kunye nombulelo kwisifundo esihle kakhulu!
Molo, ndivela e-El Salvador, kwaye ndine-Captivate i897, kwaye ndingathanda ukufumana uhlobo olucebisayo lwe-Andoid 4.1.1, ndingenza ntoni ukuba ifowuni yam yile bandinike yona, ene-Android 2.3.5. XNUMX, ngawaphi amanyathelo umntu anokufikelela kuwo?
Enkosi. Ngoku iGlass S yam isebenza ngokugqibeleleyo.
molo xa ndinika Faka i-zip kwi-sdcard kwaye andifumani fayile ndiyifumana kuphela:
-aply / sdcard / udapte.zip
-khetha i-zip kwi-sdcard
Iskripthi sokutshintsha siqinisekisa
kwaye andazi ukuba ndenzeni okanye amadoda avule nceda undincede ndiphelelwe ngumnxeba nceda emilioborjaacosta@hotmail.com
Ndingayixabisa ngokusuka entliziyweni yam
Kuya kufuneka ufake i-Recovery eguqulweyo ngokufaka i-JVU kunye ne-cfroot yayo kunye ne-Odin
Ndingayivuyela ngokusuka entliziyweni, andazi ukuba ndenzeni okanye isebenza njani
URoberth Carpinteyro Moltisanti sitsho
mhlobo kufuneka ufunde isiNgesi esincinci isisombululo lukhetho lwesibini ukusuka phezulu kuye ezantsi
Phendula uRoberth Carpinteyro Moltisanti
Xa ndifika ku Sula idatha / ukuseta kwakhona kumzi mveliso kundixelela e: ivolumu engaziwayo yendlela (cache / recovery / comans) eyadlulayo andazi ukuba ndenze ntoni, nceda undincede, indinika impazamo kula manyathelo alandelayo ikwanika impazamo kwaye ndizamile ngayo encinci ndiyazi kodwa na ndicela undincede ndibulela ngokungazenzisiyo kwangaphambili
Ujije kwaye awuzange ukhuphele oko
Ndenze onke amanyathelo kwaye ndenzile kodwa ngaphandle kwempazamo kodwa ke ayiqali ihleli kwiscreen xa i-android iqala kwaye ingaze ivuleke, kwaye ndenza njengoko kufundisiwe ukuba ndiphinde ndikwenze ukufaka i-Zip kwi-sdcard / Khetha i-zip kwi-sdcard yangaphakathi kodwa akukho nto ihlala ishiyekile kwiscreen se-Android.
umntu ugcine indlela esombululwa ngayo imibuliso
Ndiyifumana njani i-Android IceCream Sandwich 4,0,4 + kunye neTouchwiz 4,0 yokukhuphela kwi-Samsung Galaxy S3
Ukuba ufuna iJelly Bean rom, nantsi enye yeyona nto ibalaseleyo: https://www.androidsis.com/samsung-galaxy-s3-rom-inmortal-v1-1-de-dora-team-android-4-1-1/
veee ndinengxaki ngalo lonke ixesha ndifumana umqondiso othi inkqubo ye-android.process.media ime.
Oko kukuthi, unefowuni egcwele ii -apps kwaye amandla edatha aphelile.
Faka i-Tsunami rom yamva nje kwaye ngekhe ubenazo ezo ngxaki zesithuba
NAMHLANJE NDINENTO EKUQHUBEKE INKQUBO
NDENZE NTONI ??
Molo! Ndidinga uncedo!!! Ndayihlaziya i-android kwaye i-mv yayiqhuba kakuhle kude kube lusuku olunye xa isicelo sichaphazele yonke into yaqala ukuvalwa. Ndiye ndagqiba kwelokuba ndiyicime ifowuni kwaye ndiyifake kwakhona. Ndizamile ukuyiqala, kwaye indigcina ngalo lonke ixesha kunye nopopayi lwe-X ukusukela ekuqaleni de ibhetri iphele… Inokuba njalo iiyure kunye neeyure…., Ndingenza ntoni ???? Ndiyabulela kakhulu!
Noe1000arandagmail Com sitsho
molo ndine galaxy s captivate ndingayihlaziya njani?
Phendula kuNoe1000arandagmail Com
Ukubuyiselwa kweClockWorkmod kuya kusebenza kwi-gy-i9000b yam
UJosep Orteu sitsho
Ndiye ndaphazamiseka xa ndiphumeza i-rom. Ndiyigcinile kwimemori yangaphakathi engacinezelwanga, ingacinezelwanga. Ngoku ifowuni ayiphenduli kum, ngaba ikhona indlela yokugcina ngandlela thile ifolda ecinezelweyo yokuqhuba iROM? Enkosi kwaye Malunga
Phendula kuJosep Orteu
Ndine-S 19000 B kwaye andinakukuhlaziya ... ndizamile le kodwa xa ndiyilayita ikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kuvela iindlela ezine zokuqala kwaye ezinye azenzi njalo, iselfowuni yam ibingahlaziywa kwaye ngoku ngesiPhuthukezi: Ewe, ndenza ntoni?
molo bendifuna ukubuza ukuba ngaba esi sifundo sisebenzela i-samsung galaxy s scl (GT-I9003)
Hayi, kweso sigxina unenye indlela yokwenza kunye nenye into enhle kakhulu yokujonga kwi-Androidsis
wave. Ifowuni yam iye yahlala kwakhona kwaye ayindivumeli ukuba ndingene kwifowuni kwaye ayindivumeli ukuba ndifake enye i-rom kwaye ndiyicombulule phezulu ngokuqonda ngokwe-exo backu kwaye andinakukwazi ukuyibuyisela kwakhona njengoko bendinayo ngaphambili. Ngaba umntu angandinceda esk Ndiyakholelwa ukuba km ichukumisekile ekubuyiseleni into kwimemori yangaphakathi
Umbhobho kaLuis sitsho
Isebenza usebenzisa enye ingxelo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo?
Phendula kumbhobho we-luis
ana pasten sitsho
Molo NDIMNTSHA KAKHULU NDIFUNA UKWAZI UKUKHUPHELA INKQUBO YOKUBUKELA I-DIGITAL TV KWI-GALAXY YAM I9000 B CELLULAR, NGAPHAMBI KOKUBA NDINAYO, KODWA BAYITSHINTSHA INKQUBO YOKUSEBENZA NDAYE NDIHLALE NDINGASENASICELO BANGANDINCEDA, ENKOSI KAKHULU
Phendula ana pasten
Ilali ye-Ice Age Village, amaqhawe e-Ice Age eza kwi-Android